Ny lisitr'ireo fahazoan-dàlana mihoa-pampana omenay ny WhatsApp | Androidsis
Topazo maso ny alalana mila ny fanavaozana ofisialy farany ny fampiharana fandefasan-kafatra mampihetsi-po ianao WhatsApp, Tonga saina aho hoe ohatrinona ny fanekena ilainao sy ny ananantsika maninona raha atao ary manafoana araka izay itiavanao azy tsy tsikaritray akory.
Izaho dia mpampiasa mahatoky an'ny WhatsApp ary heveriko fa izany ny fampiharana tsara indrindra ny fomba, Tsy azoko hoe nahoana no tokony aloa io habaka alalana io, ao anatin'izany ny sasany izay tena tsy azoko.
Anisan'ireo fahazoan-dàlana matotra kokoa azoko jerena, misy ireo poser manao antso an-tariby tsy misy ny fanekentsika na ny fahaizana manao na koa mandray hafatra an-tsoratra ny karazana SMS.
Tena mila mahay mampiasa an'io karazana safidy io ao amin'ny terminal-ntsika ve ity rindranasa ity? safidy toa ny fahaizana miantso laharana telefaona araka ny fahalalanao raha tsy nahazo alalana mazava izahay na, ohatra, raha tianao izany mandefa SMS ho an'ireo voaantso diso Serivisy premium fa taty aoriana dia nokapohan-dry zareo izahay tamin'ny tehamaina tamin'ny faktioran-telefaona.
Ankoatra ireo safidy mampidi-doza amin'ny volavolan-dalàna an-tariby ireo dia hitako koa ny hafa tsy dia liana loatra amin'ny fahalianana sy matotra, indrindra momba ny momba anay fiainana manokana sy fifandraisana akaiky midika izany. Safidy toy ny fampiasana ny fakantsary ny terminal anay mankany makà sary sy horonan-tsary rehefa tianao izany ary tsy mila fanekena na fahefana avy amin'ny mpampiasa foana manaova rakipeo koa tsy misy ny fanekenay.
Ahoana no ilazako aminao, ity ny alalana ao amin'ny fampiharana amin'ny Android tsy maintsy fehezin'ny Google ary manamarina fotsiny ireo izay tena ilaina amin'ny fampandehanana marina ny fangatahana resahina.
Miaraka amin'ny hery nomenay ny fampiharana toa WhatsApp, fantatrao, ankoatry ny angona manokana angonin'izy ireo momba anay, zavatra hafa mety ananany. Horonam-peo? Sary sy horonantsary manokana? Ny marina dia izy ireo ihany no hahalala satria ny tena izy dia izany fahazoan-dàlana hanao ireo hetsika ireo raha nomenay anao.
Fanazavana fanampiny - WhatsApp dia mahatratra mpampiasa 400 tapitrisa manerantany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Avela hanao na inona na inona ny WhatsApp raha tsy mahazo alalana avy aminay
Salama Francisco, mino tanteraka aho fa misy zavatra tsy nety. Mampiseho ny fahazoan-dàlana takiana mba hanaovana ireo hetsika ireo fampiharana, toa ny ahafahanao maka sary avy amin'ilay rindranasa na miantso fifandraisana iray mivantana, mitaky fahazoan-dàlana ireo ny fampiharana ...
Mino aho fa raha manao ireo fihetsika ireo dia tsy mila manana alalana hanao izany ianao raha tsy misy ny fanekenao, manasongadina ny ampahany amin'ny TSY MISY CONENTENTO!.
Mieritreritra aho fa nampiseho ianao, liana kely tamin'ny fotoana nanoratana.
Ireo hafatra "fisoratana anarana" amin'ny telefaona finday.
Miantso, rehefa ao anaty chat ianao dia manome menio ary miantso.
Ary tsy hanohy ...
Ary afaka miditra amin'ny Internet koa ianao! Alao an-tsaina hoe manome anao ny misintona gig 5 toy izany. Fampidirana ny rafitra fisie! Ahoana no ahafahan'izy ireo mila azy io mba hitahiry ireo sary na horonantsary izay azontsika? Lahatsoratra mahatsiravina tanteraka, manantena aho fa noho ny tsy fahalalana fa tsy noho ny fiezahana hamafy fikorontanana momba ny fampiharana iray izay dinihina betsaka any an-kafa.
Momba ny fomba fampivelarana ny fampiharana iray, tsy misy hevitra, sa tsy izany?
Toa nanoratra ny renibeko ilay lahatsoratra fa tsy fantany hoe inona izany, tsy nahay nanoratra wasá ianao ary nanisy peta-kofehy azy
Jesus Jiménez dia hoy izy:
"Raha tsy misy ny fanekenao" dia midika fa manao azy mivantana izy io, nefa tsy mandalo ilay singa-miasa ao amin'ny rafitra miasa izay kasainy. Izany hoe, rehefa miantso ianao dia tsy mandefa anao any amin'ilay mpandefa telefaona an-telefaona an'ny rafitra miasa ary manery anao hanery ny bokotra indray, fa miantso mivantana. Ary toy izany koa amin'ny zavatra hafa rehetra.
Tena nanarona voninahitra tokoa ianao ...
Valiny tamin'i Jesús Jiménez
Manantena aho fa ahitsinao alohan'ny hamakiana azy ny olona betsaka kokoa satria efa nahay nanjary mpanoratra ianao izay manoratra momba ny android saika isan'andro. Izany dia manome hevitra momba ny haavon'ny bilaogy.
Mino tanteraka aho fa diso be ianao. Ny fahazoan-dàlana dia ny miditra amin'ireo fampiasa. Raha tsy mahazo alalana handrakitra feo ianao dia tsy avelan'ny Android hiditra ao amin'io fampiasa io ny rindranasa. Raha tsy mahazo alalana hiditra amin'ny fakantsary ianao dia tsy ho afaka maka sary avy amin'ny WhatsApp. Tsy midika izany hoe manao izany ianao rehefa maniry izany ary tsy misy ny fanekenay.
Manuel Tornos dia hoy izy:
Mampalahelo tanteraka, Francisco. Tsy manome na dia iray aza amin'ity lahatsoratra ity ianao. Inona koa, handinika fatratra ny famafana azy io faran'izay haingana aho (ary tiako holazaina izany). Ny fahazoan-dàlana amin'ireo fihetsika ireo dia mila manatanteraka ny asany ary raha tsy misy ireo fiasa ireo dia tsy hampiasa azy io na ny tatoazy ny rindranasa.
Izany rehetra izany dia avy amin'ny fankahalana maizina amin'ny WhatsApp, amin'ny marina. Azo tsikeraina izy noho ny tsy fahatokisan-tena, ny maha orinasa maizina sy manjavozavo, ho an'i Yankee na ho an'ny lefitra ... fa izay napetrakao teo amin'ny toeranao dia tsy tazomina na dia misy sipakely aza.
Valiny tamin'i Manuel Tornos
Tsara raha nanome hevitra anao ry zareo….
Mba hanombohana ny adihevitra momba ny hevitra rehetra voaray dia tiako ny milaza fa toa tsy nahatakatra ilay lahatsoratra ianao na mamaky izay mahaliana anao fotsiny. Averiko ihany fa ho ahy WhatsApp no ​​fampiharana tsara indrindra amin'ny fomba ary amin'izay nolazaiko ato amin'ity lahatsoratra ity dia tsy te-hanaratsy azy aho na milaza fa manimba azy io, ny filazako fotsiny dia hoe miaraka amin'ireo fahazoan-dàlana ireo ihany no azon'ny fampiharana ratsy atao ary esory ny sain'izy ireo nefa tsy tsikaritr'ilay mpampiasa. Ity dia mety fa indrisy fa efa nitranga tamin'ny fampiharana hafa ary matetika kokoa noho izay rehetra tadiavintsika.
Fampiharana hajaina ny WhatsApp fa tsy midika hoe raha te-hanararaotra ireo tombontsoa na fahazoan-dàlana ireo izy ireo dia afaka manao izany tanteraka.
YonkoMom dia hoy izy:
Tsy manana hevitra momba ny fandaharana ianao, mazava ho azy ...
Rehefa manao an'ity ianao:
Antso am-piniavana = Fikasana vaovao (Intent.ACTION_DIAL);
call.setData (Uri.parse ("tel:" + nomera));
startActivity (Intent.createChooser (miantso, «Safidio ny endrika antso:»));
Mangataka fahazoan-dàlana aminao hiantsoana laharana finday mivantana ... Ary miaraka amin'ireto andalana ireto, ny hany zavatra azonao dia ny fisokafan'ny terminal fiantsoana ... tsy hoe miantso tsy misy fampandrenesana ... Marina ny fanovana ny ACTION_DIAL nataon'i ACTION_CALL, manao antso mivantana, fa andao hojerentsika hoe iza ny monguer mametraka an'io ao anaty kaody, satria azo taterina.
ALA, ndao hojerentsika raha mihaino ny olona milaza aminao ianao fa manao hadalana ny tenanao, satria marina tanteraka izy ireo.
Mamaly an'i YonkoMom
Tsia, nefa matotra ankehitriny… marina ny anao, satria ny ACTION_CALL dia mangataka fahazoan-dàlana satria miantso mivantana izy io, saingy tsy misy ACTION_DIAL.
Bori dia hoy izy:
Sendra izay nolazaiko tamim-pahamendrehana izay rehetra efa nolazain'ny mpampiasa hafa tao anaty ireo hevitra ireo. Tena gaga tamin'ilay lahatsoratra. Manantena aho fa ahitsin'izy ireo izany satria ny mpampiasa tsy za-draharaha mino izany ary avy eo ny zava-mitranga.
Valiny tamin'i Bori
Nasehonao fa tsy hitanao izay hevitrao….
Valiny tamin'i Titus
zahao aloha ny fahazoan-dàlan'ny sasany amin'ireo rindranasa heverinao fa azo antoka amin'ny trano fivarotana. Mety mbola ho gaga ianao.
Faharoa, omeo solony ireo alalana izay heverinao fa tokony hisolo ny ankehitriny. Ohatra, inona ny fahazoan-dàlana homenao fa tsy "miantso laharana finday mivantana"? Azonao atao koa ny milaza aminay ny fomba ahafahanay miantso fifandraisana mivantana avy amin'ny WhatsApp raha tsy misy izany alalana izany.
Farafaharatsiny, mieritreritra aho fa ny fanoloana ny teny WhatsApp amin'ny Android amin'ny asa soratra dia ho fahombiazana. Ireo no fahazoan-dàlana anananao amin'ny android ary mila manamboatra na manafoana ny fampiasa ianao.
Mikasika ny fanovana ny anaran'ny fampiharana ohatra dia marina ny teniko, afaka nampiasa ny teny Android na Android Applications aho nefa tsy nisy isalasalana fa ny teny WhatsApp dia nisy fiatraikany sy fifantohana bebe kokoa. Mazava fa ny mitovy na ny ratsy dia azo lazaina momba ny fahazoan-dàlan'ny fampiharana toy ny Line, ChatOn, sns, sns.
Miaraka amin'ny fanajana rehetra eto amin'izao tontolo izao, tena izy, fa ny lahatsoratra toa an'io dia mampihena ny haavon'ny bilaogy, ambany ho azy, hatramin'ny aotra. Francisco, aza manandrana milaza amin'ny fanehoan-kevitra hoe "tsy takatrao ny bla bla ..." na ny ratsy indrindra, mariho ny maha-ratsy ny lahatsoratra amin'ny hoe "tsy azonay izany" (antsoinao hoe adala izahay na inona?) Diso sy ratsy fotsiny ilay lahatsoratra. Na esorinao izy io mba tsy hamitahana sy hanaitra tsy misy antony, na hamoaka fanitsiana, fa ambonin'izany rehetra izany, aza manompa ny fahalalan'ny mpamaky ao anaty hevitra.
Tsy fantatro hoe aiza no ahitanao ny fikasako hanompa, tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy ary mendrika ny hamerina eo imason'ny zava-drehetra.
Manararaotra mametraka ity fanontaniana ity amin'ireo manam-pahaizana tezitra aho:
Raha te hanao zavatra ratsy ny WhatsApp, ny Line na ny rindranasa rehetra miaraka amin'ireo alalana rehetra ireo, afaka nanao izany ve izy raha tsy nahazo alalana mazava taminay?
Eny eny, Francisco, nampiseho fotsiny ny hevitro ianao. Hatramin'ny fotoana nilazanao fa "ho ahy WhatsApp no ​​fampiharana tsara indrindra amin'ny fomban-tsarimihetsika" dia mahafeno ny fahalalanao ny tontolon'ny Android sy ny fampiharana ianao, ary mametraka ny tenanao amin'ny sehatra mpampiasa ambany be ianao.
WhatsApp dia fampiharana tena ratsy - saingy miaraka amin'ny tahan'ny fidirana an-tsena mahavariana. Tsy misy zavatra hafa. Ary raha nampihatra fanovana vitsivitsy ianao tamin'ny taon-dasa (fanamarihana feo, ohatra) dia voatosiky ny fifaninanana ianao. Ary na eo aza izany dia manohy mandingana ny fepetra fiarovana takian'ny mpampiasa mandroso aminy izy ireo.
Ny fomba fiasa omenao amin'ny hevitrao (ohatra amin'ny fampiharana) dia tsara, saingy raha ny marina, saingy mila manova ny teny rehetra ao amin'ilay lahatsoratra ianao hatramin'ny loha ka hatramin'ny tongotra.
aza dia matanjaka loatra, heveriko fa tsara ny fikasan'ilay lahatsoratra, jereo ny olan'ny fahazoan-dàlana ..., ny zava-mitranga dia tsy voambara tsara izany, ary koa nalainay tamin'ny minitra voalohany teo amin'ny lafiny ratsy ..., fa farafaharatsiny maha bilaogy android anao dia afaka nametraka sary whatsapp tamin'ny android ianao fa tsy tamin'ny iOS.
Cañeros koa, fa ny tena marina dia ao anaty bilaogy iray ianao dia tokony hanana fotoana hanomanana lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy, ka toa tsy dia matotra loatra ny famoahana azy amin'ny hadisoana manjelanjelatra toy izany ary ambonin'izany dia tsy miraharaha izany ireo hevitra izay toa tsy manimba amin'ny fotokevitra. raha tsy mahomby hametrahana lahatsoratra tsara kokoa.
androllo dia hoy izy:
Ho fanampin'ireo fanehoan-kevitra tsara tarehy rehetra ireo dia marina daholo izay lazain'ny lahatsoratra.
Ny programa dia mila ireo alalana rehetra ireo hanao izay atolotray peeeeero ...
... azonao atao ihany koa (amin'ny fotoana rehetra) izay lazain'ilay lahatsoratra:
- Raketo horonan-tsary, sary ary feo.
- Mamaky, mandika, mampiasa na mandefa ny lisitry ny fifandraisana miaraka amin'ny angon-drakitrao rehetra an-tserasera.
- Manaova antso ary mandefasa SMS amin'ny tranonkala rehetra.
- Alefaso izay rakitra avy amin'ny telefaona amin'ny Internet.
- Ary maro ny doggies hafa.
Mampalahelo fa misy programa marobe izay mangataka alalana maro ary tsy afaka mametra azy ireo izahay ... raha tsy miorim-paka.
Mamaly an'i androllo
"Raha te hanao zavatra ratsy ny WhatsApp, ny Line na ny rindranasa rehetra miaraka amin'ity alalana rehetra ity, moa ve afaka manao izany raha tsy misy ny fanekentsika mazava?" Eny, milaza aminao izahay, fa ny lahatsoratrao dia tsy miresaka momba ny "loza ateraky ny fahazoan-dàlana hampihatra amin'ny Android" fa "ny lisitry ny fahazoan-dàlana mihoa-pampana omenay an'i WhatsApp". Lokoy ny loko tianao, fa diso daholo hatramin'ny voalohany.
Raha ny fanazavana, ny fanaraha-maso alalana Android dia tsy mety fa ahoana kosa ny fibaikoana ny alalana iOS? (Fanontaniana tso-po izany, avy amin'ny tsy fahalalana tanteraka an'ny iOS).
"WhatsApp dia misy fiatraikany bebe kokoa"
Ataonao laharam-pahamehana ve ny fiatraikany noho ny tena zava-misy amin'ny vaovao? Misy anarana izany: presse mavo.
"Raha te hanao zavatra ratsy ny WhatsApp, ny Line na ny rindranasa rehetra miaraka amin'ity alalana rehetra ity, moa ve afaka manao izany raha tsy misy ny fanekentsika mazava?"
Fantatry ny rehetra fa ny fiarovana amin'ny android dia marefo ... toy ny windows sy ny rafitra fandidiana hafa ...
Manizingizina aho fa mety misy dikany ilay lahatsoratra raha manova WhatsApp ho an'ny Android ianao, saingy mazava ho azy "ny WhatsApp dia misy fiatraikany sy fiheverana bebe kokoa."
Alvaro M. dia hoy izy:
Mazava ho azy fa izay rindranasa rehetra manana alalana dia afaka mampiasa izany fahazoan-dàlana izany amin'ny fomba marina, na amin'ny fomba ratsy. Ny fanontaniana dia ny "laza" mety hananan'ny developer / orinasa, hatoky anao na tsia. Azonao omena ny reninao sy ny junkie eny an-joron-trano ny lakilen'ny tranonao, ary tsy azo inoana fa handroba ny tranonao ny reninao, saingy afaka manao izany izy dia afaka.
Fanamarihana amin'ny lahatsoratrao:
"Izaho dia mpampiasa mahatoky ny WhatsApp ary mieritreritra aho fa io no fampiharana tsara indrindra amin'ilay fomba, tsy azoko hoe maninona no omena io habaka io, ao anatin'izany ny sasany izay tena tsy azoko mihitsy"
- >>>>>> Anontanio ireo izay tsy mahazo fa manazava azy ireo aminao izahay
"Tena mila mahay mampiasa an'io karazana safidy io ao anaty terminal-ntsika ve ity rindranasa ity?"
- >>>>>> Eny, raha te-hiantso amin'ny WhatsApp ianao, izay hitako fa tena mety aminao, dia mila alalana amin'ny antso ianao. Raha te hisoratra anarana ny SMS. Raha te handefa sary ianao, ny iray hiditra amin'ny fakantsary. Mila miditra amin'ny rafi-drakitra ianao raha te handefa horonantsary na sary efa voarakitra ao amin'ny tobinao. Ny mikrô, handefasana ireo naoty audio ... lava sns.
Araka ny nolazaiko, ity alàlana amin'ny rindranasa ao amin'ny Android ity dia tsy maintsy fehezin'ny Google kely ary manamarina ireo izay tena ilaina amin'ny fampandehanana marina ilay fangatahana resahina.
- >>>>>> Tsy afaka mifehy ny alalana i Google, satria alalana izy ireo, ianao no tokony hifehy azy ireo. Raha tsy misy ireo "alalana tokony hofehezin'i Google" izay lazainao, WhatsApp dia ho fifampiresahana an-tsoratra, fotoana. Fa maninona no toa tsy dia mahafinaritra anao intsony izany?
«Noho ny hery nomenay ny fampiharana toa ny WhatsApp, fantatrao, ankoatry ny angon-drakitra manokana angonin'izy ireo momba anay, zavatra hafa mety hananan'izy ireo. Horonam-peo? Sary sy horonantsary manokana? Ny marina dia izy ireo ihany no hahalala satria ny tena izy dia nomena alalana hanao ireo fihetsika ireo »
- >>>>>> Fanairana! Amarillismo sy conspiranoia !!!
Na izany na tsy izany dia tsy hilaza zavatra tsy mbola notantarain'ny mpiara-miasa hafa aminao aho taloha, fa ny lahatsoratra kosa dia fako madio. Izahay izay manana hevitra dia mahazo azy amin'ny sazy fahefatra, ary ny olona tsy manana hevitra, dia afangaroo tsy misy antony izy ireo. Raha te hiasa amin'ny lahatsoratra fiarovana amin'ny Android ianao dia manana fitaovana be dia be, fa ny nataonao dia tsy mandeha na dia ho an'ny bilaogy Apple-mpankafy mandona indrindra aza.
Fahendrena ny fanitsiana, na dia mifanaraka amin'ny valin'ny valinteninao aza ireo hevitra ireo, manome ahy toerana tsara kokoa izany.
Valiny tamin'i Alvaro M.
Coper Fix dia hoy izy:
Raha hijery ny lahatsoratra dia tsy hoe milaza zavatra diso izy fa raha ny fahitako azy dia zavatra manaitra izany. Marina fa mangataka alalana be loatra ny WhatsApp fa raha tsy misy azy ireo dia tsy mandeha ny ankamaroan'ny fanampiny, toy ny fandefasana hafatra voarakitra na fiantsoana mivantana avy amin'ny mombamomba ny mpampiasa.
Betsaka aminareo no mangataka amin'ny mpanoratra hamafa ilay lahatsoratra raha ny fahitana azy mifanohitra amin'izay no ahatongavanao mifanohitra amin'izany, fa ny mpitsidika dia mifindra ary noho izany dia mijanona eto ambony ambony ianao.
Valio amin'i Coper Fix
Coper Fix. Hoy ianao "marina fa mangataka alalana be loatra ny WA fa raha tsy misy azy ireo dia tsy mety miasa ..." Ka aiza no ifanarahanay? Be loatra ve izy ireo? Sa izy ireo no ilainao? Raha mila azy ireo ianao dia tsara, raha nangataka fidirana amin'ny teny miafin'ny Wi-Fi ianao dia azo antoka fa be loatra izany, fa raha te handray (sy hitahiry) ireo sary sy horonan-tsary dia tsy maintsy noraketinao an-kafa izany. .. Marina hoy aho?
Ka raha tsy marina dia mangataka alalana be loatra, ny lohatenin'ilay paositra (averiko: «ny lisitry ny fahazoan-dàlana omena antsika Whatsapp»), amin'ny famaritana, tsy azo antoka (na diso, na lainga , izay tianao hiantsoana azy).
Ho an'ny INRI misimisy kokoa, ny fanoratana ny lahatsoratra dia miorina amin'ny teôria sasany ary fanamafisana izay mahazatra kokoa amin'ny neophyte tanteraka amin'ny rafitra miasa fa tsy ny "fatra-pitia ny siansa informatika" (toa ny famaritan'i Francisco ny tenany ao amin'ny mombamomba ny WordPress).
Mety ho tsara ihany koa ny lelafo, miankina amin'ny daty na fotoana inona (na miankina amin'ny lohahevitra inona), fa amin'ny vanim-potoana antonony, ny vokatr'izy ireo matetika dia mifanohitra amin'izay tadiavina ary misy fihenan'ny fitsidihana (mitsahatra tsy matoky ny olona , avelan'izy ireo ny famandrihana ny famandrihany rss, na ajanony ny fanindriana ireo rohy raha toa ka avy ao amin'io bilaogy io izy ireo, ho an'ny fisarahana tsotra).
Tsy misy bilaogera matotra manaiky ny lelafo ho lahatsoratra ekena.
Raisinareo an-tsakany sy an-davany ilay fanontaniana, izay rehetra lazaiko na hazavaiko eto dia ny zava-misy madio indrindra ary tsy nisy namorona akory. Averiko ihany fa tsy misy olona tsy matoky ny WhatsApp sy ny lazany tsara, izaho no voalohany nametraka azy. Saingy tsy heverinao ho fandrosoan'ny finoana lehibe ve ny fanomezana ny fahatokisanao ny fampiharana ilay fomba milaza ny fanajany sy ny asany tsara fotsiny? Tsy mieritreritra ve ianao fa fitokisana mihoapampana io ary tsy tokony hisy toerana hanaovana an'izany ary tsy mamela ny fangatahana afaka manao ireo fihetsika ireo raha toa ka heveriny fa mety izany raha tsy misy ny fanekenay?
Ho an'ny ambiny, averiko ihany fa tsy mieritreritra aho hoe manaitra olona na manisy ratsy ny WhatsApp izany, ny zava-misy sy ny alalana tena ilaina ilainy fotsiny no resahiko ary manome WhatsApp izahay.
io dia mitovy amin'ny fampiasana keygens ... maimaim-poana ary milamina ny zava-drehetra, miaro azy ireo ny tsirairay ary milaza hoe tsia, ahoana izany ... mandra-pahatonganao indray andro manao fanadihadihana momba ny solosaina ary tsapanao fa manana viriosy hafa ianao ankoatry ny keygens ... io antivirus io dia tsy manome positives diso intsony, dia toy izany ihany koa, ho an'ny zavatra tsikaritry ny antivirus ho viriosy, amin'ny tranga android, ho an'ny zavatra lazainy TANORA AZONAO, raha tsy izany dia tsy hiteny hoe , ho an'ny zavatra ampitandreman'ny antivirus android anao fa apetraky ny fampiharana sasany atahorana ny fiainanao manokana, saingy hey, tsy misy te hanaiky izany, satria tsy ny paosin'izy ireo izao, manohitra ny lahatsoratra toa izao ny tsirairay, arahaba fran
Marina Manuel, ny tiako holazaina dia mangataka alalana be loatra raha oharina amin'ny rindranasa hafa. Tsara tokoa raha ireo nangatahinao no nampiasanao.
Francisco hoy ianao fa tsy heverinao ho manaitra olona ... Ny lohateny fotsiny dia efa mamela vatana ratsy.
Raha tsy nandeha lavitra intsony aho dia efa nanoratra imbetsaka momba ny whatsapp ao amin'ny tranonkalako, tsy fampiharana izay ahazoako tombony lehibe izany, fa ny zavatra ataony, izany dia miaraka amin'ny alàlan'ny fankatoavan'ny mpampiasa izay ilay manindry izay miantso ary izay mandefa sms (karama).
Na inona na inona ataony ao anatiny, dia tsy maintsy hino izay ambaran'ny WhatsApp inc toy ny tontolo tsy miankina iray manontolo isika.
Raha dinihina tokoa, na dia manana alalana haka sary aza ianao, tsy ara-dalàna ve ny maka sarin'ilay mpampiasa raha tsy mahazo ny fankatoavany? (andian-teny izay asongadinao amin'ny mena)
Marcossit dia hoy izy:
Valiny tamin'i Marcossit
Momba ny fomba fanoratana ny lahatsoratra fa tsy ny atiny. Mandalina fifandraisana an-tsary na audiovisual aho, izay misy lohahevitra fanaovan-gazety sy ny fomba fanoratana vaovao sy lahatsoratra hafa. Rehefa miteny ohatra ianao hoe "tsy azonao ilay lahatsoratra na izay zavatra mahaliana anao fotsiny no vakianao", dia mila manao izany ny mpamoaka lahatsoratra, mitatitra, mamerina na izay mazava araka izay azo atao. Raha tsy "mahatakatra" azy ny mpamaky dia hadisoan'ny tonian-dahatsoratra. Raha te hametraka WhatsApp ianao hisarika ny saina bebe kokoa fa tsy fomba hafa omena anao dia aza mimenomenona raha tsy takatra araka ny itiavanao azy, satria averiko ihany fa tsy ny mpamaky ny 95% amin'ireo tranga ireo no lesoka.
Heveriko fa voasoratra tsara ny lahatsoratra satria amin'ny fomba fijerin'ny Faharefoana ny olana dia noho ny fahazoan-dàlana maro izay ananan'ny WhatsApp, izay olona manana fahalalana farafahakeliny amin'ny Fampandrosoana dia afaka manararaotra izany ary mamorona varavarana ambadika hifehezana ny fitaovana disestra na ratsy toetra. Heveriko fa ny faharefoana ananan'i Android amin'ny alàlan'ny fanomezana alalana betsaka amin'ny fampiharana. Ary lazaiko fa ny ankamaroany dia tsy misintona apk tsy fantatra na adala amin'izay hitany ao. Saingy raha maro no tia misoloky amin'ny lalao ary ireo apk Modified ireo dia tsy mahalala hoe iza no namorona azy ireo tamin'ny fomba namoronana azy ireo, dia tsy manana mari-pahaizana Google izy ireo ary izany no manomboka manome olana ny rafitra. Azoko antoka fa ny WhatsApp + miampy ny mpamorona azy dia tsy maintsy manana anaty tahiry ny isa sy ny sarin'ireo tsirairay izay mampiasa ity fampiharana ity, azoko atao aza ny mandeha lavitra ary manana sivana ho an'ny sary izay alohan'ny hahatongavany amin'ny mpizara avy amin'ny WhatsApp, mandalo ny sasany. anao ary mifanentana amin'ireo sary ireo. Azo atao daholo ny zava-drehetra fa tsy maintsy mitandrina isika amin'izay apetrantsika amin'ny telefaona na tsia.
Tena tsara izany, saingy tsy miresaka momba izany ny lahatsoratra, tsy miresaka momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fampiharana, tsy miresaka momba ny fangatahana azo tamin'ny fomba hafa noho ny fivarotana kilalao sy ny loza mety hitranga ... ny lahatsoratra amin'ny ankapobeny milaza «Whatsapp manana fahazoan-dàlana marobe izy ary tsy fantatsika izay ataon'izy ireo amin'izy ireo.” Ary manontany tena izy hoe inona no ilainy amin'izy ireo, raha efa nohazavainay tsara ny antony ilàn'izy ireo azy ireo.
Mametraka anao hieritreritra toy izany, Android dia manana alalana REHETRA, ary raha rahampitso dia manapa-kevitra ny hangalatra ny nomeraon'ny carte de crédit anao i Google, dia hanao izany, toy ny fanokanana ny WhatsApp hanaparitaka ny sarin'ny zanakao amin'ny alàlan'ny paositra, na ny facebook. ampidiro eo amin'ny rindrin'ny namanao ireo hevitra manavakavaka. Raha mieritreritra ianao fa lasa paranoida dia avelao tsy hisy izany.
Ny famakiana ny fanazavana dia mety ho tsara ny fikasan'ny lahatsoratra, saingy nijanona tamin'izany fa mampidi-doza ny fampandrosoana azy. Mamaky bilaogy / vaovao / sns Android isan'andro aho (anjarako izany), ary tsy nisy fotoana hitako mihoatra ny fikasana hamorona marika (tsy ara-dalàna), mifanohitra amin'ny fampiharana manokana (tsy misy fototra)
Francisco, mbola mafy hatoka ihany ianao amin'ny zavatra tsy misy ifandraisany amin'izany.
Android, amin'ity tranga ity, dia manome mazava sy antsipirian'ny fampahalalana izay tsy omen'ny rafitra miasa hafa (iOS, Windows na Linux). Fantatrao ve izay loharano ao amin'ny solosainao (tamba-jotra, kapila, Photoshop na Office afaka miditra? (Lazaiko aminao: TENA IZAY REHETRA).
Amin'ity tranga ity dia mampitandrina anao ny Android. Tsara izany. Fa isika roa (amin'ny alàlan'ny fandraisanay anjara amin'ny naoty Google Play na ny heviny) sy Google tenany (amin'ny alàlan'ny fifehezana ireo rindranasa ireo) dia ireo izay mifehy ny fidiran'ny fampiharana ratsy.
Ny rafitra fahazoan-dàlana Android dia eo amin'ny INFORME us, fa tsy ny ALERT US. Io no zavatra mahazatra indrindra eto an-tany raha manana alalana hiditra amin'ny fakantsary ny WhatsApp raha tsy mahazo alalana manokana (heverina fa efa manome azy ireo izahay rehefa milaza fa te handefa sary nalaina niaraka tamin'ny fakantsary). Toy izany ihany koa raha tehirizina horonantsary izay andefasan'izy ireo amintsika. Alao an-tsaina ny fomba mahasosotra raha isaky ny te-hanao zavatra izy dia mila mangataka mazava amintsika alalana (ankoatry ny zavatra hafa, tsy afaka nifampiresaka akory izy).
Saingy miala amin'ny tanana isika. Ny olan'ny fitarainana ao amin'ireo fanehoan-kevitra dia (na dia fahavalo WhatsApp marobe toa ahy aza), izay naseho tao amin'ny Roman Paladino, fa miresaka ratsy momba ny WhatsApp ny lahatsoratra noho ny fahazoan-dàlana nomeny; fa ireo fahazoan-dàlana ireo dia ara-dalàna raha jerena ireo toetra atolotry ny programa ary raha toa ka manizingizina ny hamerenany ny mpanoratra dia momba ny filaminana amin'ny Android ny lahatsoratra, tsy misy mahatakatra izany, ny mpamaky adala no lesoka satria tsy azontsika izany ... tsy maintsy tsy afaka mamaky eo anelanelan'ny tsipika sy ny voalaza isika fa "ny lisitr'ireo fahazoan-dàlana mihoa-pampana omentsika ny WhatsApp" dia midika hoe "firy ny fahazoan-dàlana angatahan'ny fampiharana android, hoy ianao", saingy tsy mamela anay ny myopia jereo ny tena dikany nomen'ny mpanoratra anao. (sic!)
davinci dia hoy izy:
Jereo fa mankahala WhatsApp aho (efa nipaoka azy efa mihoatra ny herintaona lasa izay noho ny antony maro ary mampiasa LINE aho) fa amin'ity lahatsoratra ity dia nandalo ianao. Izay tsy hita fotsiny hampijanonana ny famakiana ity bilaogy ity dia esoriko amin'ny RSS.
Tsy hahita intsony.
Mamaly an'i davinci
akoho dia hoy izy:
Ny fanavaozana farany ny whattsap amin'ny android dia milaza mazava tsara, amin'ny alàlan'ny fakantsary: ​​«mamela ny fampiharana haka sary na handefa horonantsary miaraka amin'ilay fakantsary. Ity fahazoan-dàlana ity dia manome alalana ny fampiharana hampiasa fakan-tsary amin'ny fotoana rehetra tsy misy alalana anao »
Toa fanararaotana ahy ity sazy farany ity. Tsy hoe ny fakantsary dia miditra amin'ny fakantsary na ny galeriana hahafahanao mandefa sary. Saingy toa ny fampiharana, raha ilaina, dia ho afaka haka sary anao raha tsy fantatrao. Ho ahy ity fampiharana ity dia tokony hanazava ny antony amelan'i Google io alalana io
Andao hojerentsika, tsy azontsika ny fotony: Fahazoan-dàlana Android.
Izay rehetra voalaza momba ny "TSY MISY CONSENT-nao" ... ny fanekenao dia ny manome alalana ny application X. Raha vantany vao nomenao izany fangatahana izany ny fampiharana, satria ilainy izany, ny rafitra (Android) dia tsy afaka manavaka raha maka sary ilay rindranasa satria nomenao ny bokotra, na raha toa ka natao programme naka sary. Isaky 15 minitra ary andefaso any amin'ny mailaka an'i Obama manokana.
Amin'ny android, ny manaiky na tsia dia manome alalana na tsy manome azy ireo. Mampitandrina i Google, ary raha tsy ekenao dia mora toa ny tsy mametraka ny rindranasa. Raha angatahina ny fanekena isaky ny mampiasa fahazoan-dàlana dia tsy ho azo ampiasaina ilay finday satria handany ny ainay amin'ny fitenenana hoe "Eny"
Tsy hoe "raha tsy mahazo alalana aminao," dia "tsy mahazo alalana aminao." Izay koa lesoka. Omenao alalana izy rehefa apetrakao. Toy ny amin'ny rindranasa apetrakao amin'ny fikandranao, manome alalana ianao (na dia tsy milaza aminao aza ny rafitra miasa) hiditra amin'ny webcam-nao ... fantatrao izany, na tsy fantatrao ... mampitandrina anao izy io , na tsy mampitandrina anao izany.
Ny fitantanana ny rindranasa dia tsy maintsy mifototra amin'ny rafitra atokisana (Matoky aho fa atokisana ilay rindrambaiko ary tsy handrehitra fakan-tsary samirery izany ary handefa ahy hipetraka eo amin'ny fidiovana).
Raha tsikaritrareo, io fahazoan-dàlana io ihany dia tantanan'ny Line, BBM, WeChat ary Hangouts. Ao amin'ny KitKat Android-ko dia miresaka fahazoan-dàlana izy hoe "Avelao ny sary haka sary na handefa horonantsary miaraka amin'ny fakantsary. Ity fahazoan-dàlana ity dia manome alalana ny fampiharana hampiasa fakan-tsary amin'ny fotoana rehetra tsy misy ny fanamafisanao. Vakio tsara: CONFIRMATION, izay tsy mitovy amin'ny AUTHORIZATION. Jereo ao amin'ny rakibolana raha tsy mino ahy ianao. 😉
Tsy ilaina ny manamarina alàlana iray izay efa nomena (amin'ny fotoana fametrahana).
Amin'ny sasany amin'ireo hafa dia manana alalana mitovy amin'ny "Fiantsoana an-tariby" izy ary milaza fa "Mamela ny fampiharana miantso tsy misy fitsabahan'ny mpampiasa, izay mety hiteraka antso na fiampangana tsy ampoizina. Azafady, mariho fa ny rindranasa dia tsy afaka mampiasa an'ity serivisy ity hiantsoana nomerao vonjy maika, fa ny fampiharana maloto dia mety hiteraka fandaniana tsy ampoizina aminao amin'ny alàlan'ny antso raha tsy misy ny fanamafisanao.
Ary io dia, na inona na inona fanomezana omentsika azy, Android dia mametra ny tenany hampahafantatra antsika ireo fahazoan-dàlana izay takian'ilay fampiharana (izay efa MAFY bebe kokoa noho izay atolotry ny rafitra miasa hafa).
Manizingizina ve ianao fa voaorina ity?
Sahy manohy miaro ny haben'ny hadalana napetrakao ve ianao?
Ianao ve manizingizina ny hanakorontana amin'ny fampiharana fa tsy ny android?
Samy maka zavatra tsy an-kanavaka ve ny tsirairay? Ianao dia iray amin'ireo milaza fa misy fomba roa ahitanao zavatra, ny iray hitako ary ny tsy izy.
Nanome ohatra tena mazava anao izy ireo.
Ny sarin'ny app IOS fa tsy ny android no mololo farany ...
Manome toky anao aho fa very mpamaky ity bilaogy ity androany.
rom3ox dia hoy izy:
Io no olana iray mitovy foana, andraikitry ny orinasa na ny fangatahana ny milaza izay alalana ilainy, izay ataony amin'ity tranga ity sy ny andraikitry ny mpampiasa mamaky azy ary manaiky azy raha manaiky izy ireo na tsia. Raha miaina ao anaty fiarahamonina izay manao sonia sy mandray zavatra isika nefa tsy mamaky azy ireo noho ny fiononana na fahazarana, dia ny fiarahamonina tokoa no lesoka. Ny fampiononana sy ny fiainana manokana dia tsy zavatra 2 mifanentana be amin'izao fotoana izao.
Mamaly an'i rom3ox
Oscar C. dia hoy izy:
Tsy mbola novakiako ny hevitra rehetra, fa ampy hahitako izay alehan'ny tifitra. Heveriko fa samy manana ny antony kely na betsaka (an'ireo novakiana) izy rehetra, koa i Francisco, miaraka amina fampitandremana iray, ny fahazoan-dàlana angatahin'i WhatsApp dia tsy olana amin'ny Android, olan'ny mpampiasa izany, ary na dia mangataka aza ireo alalana ireo dia apetraka. izany. Heveriko fa misy tranga hafa mihosin-dra kokoa, toa ny an'ny Facebook, noho ny fanavaozana 2 na 3 dia tsy nanavao azy aho.
Miombon-kevitra amin'i Francisco ihany koa aho rehefa nanondro izy fa manome alalana azy ireo miantso isaky ny maniry izy, ny tena izy dia tsy nanao an'io fampiasana io (hijanona ao amin'ny log de ligne system) fa azony atao.
Ireo izay milaza fa misy fampiharana tsara kokoa dia marina ihany koa, raha ny fahitako azy, WhatsApp dia tsy lavitra. Tena tsara vintana izy na nahita be dia be, tsy haiko.
Aza mandany fotoana be miaraka amin'i Francisco, tsy nametaka lainga izy, fandikana somary nihoatra fotsiny, tsy ilaina ny manao ra, raha tsy tianao ny bilaoginy esory ao amin'ny RSS mpanjifanao.
Valiny tamin'i Oscar C.
Tsy fantatro izay mampalahelo kokoa raha ny lahatsoratra na ny valinteninao.
Diegazo dia hoy izy:
Tato ho ato dia mihena mampatahotra ny kalitaon'ny hafatrao. Lahatsoratra tsy misy dikany inona izany.
Mamaly an'i Diegazo
toerana dia hoy izy:
Miala tsiny aho fa… Manolora tena amin'ny zavatra hafa… .. isaky ny mamaky azy aho dia ratsy kokoa !!!!
Mamaly amin'ny tranokala
ree dia hoy izy:
Vaovao mahafinaritra Francisco. Izaho koa dia "mikorontan-tsaina" miaraka amin'ny alalana whatsapp. Afaka naka sary sy horonan-tsary avy amin'ny WhatsApp foana aho na niditra tamin'io rindrambaiko io ihany ary nandefa izany tany amin'ireo mpifanerasera amiko. Averiko ihany, satria foana. Fa izao dia hita fa tao amin'ilay fanavaozana vaovao dia nanampy fahazoan-dàlana hangataka haka sary sy horonan-tsary izy ireo nefa tsy nahazo alalana avy amin'ny mpampiasa. Tsy mahita fanamarinana mety ho an'izany aho satria afaka naka sary sy horonan-tsary hatrizay ary ny hany zavatra hitako nanampy izay dia ny fahafaha-mampiasa malalaka ny alalana ary tsy misy fanekena. Tezitra mafy aminao ny rehetra, toy izay nitranga tamin'ireo izay nilaza ny marina momba an'i Google ary izay mangina tokoa ankehitriny momba ny olan'ny varavarana ambadiky izay navelany hitsikilo. Tsy hiteny zavatra hafa aho. Misaotra anao nizara an'ity. Na mifanaraka aminao ny olona na tsia, mba hiezaka fotsiny hampahafantatra ny loza mety hitranga amin'ireo fahazoan-dàlana ireo dia efa ankasitrahana izany. Miarahaba anao!
Mamaly an'i ree
Tsy misy tongony na loha io ary toa ny maro no milaza fa tsy mahalala tanteraka ny fomba fiasan'ny Android. Raha natao ho fitsikerana ny rafitra fahazoan-dàlana Android ilay lahatsoratra, dia ho azoko izany fa tsy hanoherana fampiharana iray manokana izay mila ireo fahazoan-dàlana ireo hiasa ary tsy manao izany raha tsy misy ny fanekenao satria manontany anao izy rehefa apetrakao raha ekenao na tsia - toy ny fampiharana hafa-. Izay whatsapp tsy fampiharana azo antoka indrindra eto an-tany noho ny antony hafa tsy misy ifandraisany tanteraka amin'ny zavatra hazavaina eto dia zavatra iray fa izay resahina eto dia tsy misy dikany. Hadalana amin'ny lahatsoratra.
Raha afaka sy notsinjaram-pahefana ny WhatsApp dia tsy nanjo ny olon-dehibe izany rehetra izany. Andraso! Misy izany! Mampiasà JABOBA ARY MIALA BE IZAO $ APLIKA !!
Eny ... mitety Internet mitady vaovao hafa, tonga eto aho. Tsy mpamorona aho, na manam-pahaizana Android. Manana ny findaiko sy ny takelako aho "miorim-paka", noho izany dia mifehy ny fahazoan-dàlana miaraka amin'ny tompona fiarovana LBE aho satria hitako volana vitsivitsy lasa izay ny fangatahana fangatahana alalana sasany izay tsy nilain'izy ireo hatramin'izao. Azoko tsara izay rehetra nolazaina ary noho izany dia ampiasaiko ny safidy "manontany". Satria farafaharatsiny mba hanontany ahy izy rehefa mila izany izy.
Ny tsy azoko dia ny filàna, ny anarana; ny «Angry Bird» miovaova, amin'ny lafiny fahazoan-dàlana amin'ny toerana. Ka afaka nanonona vitsivitsy aho. Tsy te hiady hevitra aho, fa araka ny filazan'izy ireo, "Ny iray amin'ny sokay ary ny iray fasika."
Mamaly anao aho alohan'ny mpampanonta (antenaiko) fa tsy ho diso ny fahazoanao azy… : p
Matetika ny fampiharana maimaimpoana dia mangataka io alalana io hanatsarana ny doka amin'ny alàlan'ny fampisehoana valiny miorina amin'ny toerana. fiarahabana
Eny ... noho ny fisoratana anarana dia azoko ny hafatrao Carlos. Misaotra, tsy nianjera tamin'io antsipiriany io aho izay hita fa manazava tokoa satria misy fangatahana manana izany alalana "Toerana" izany. Izany koa, amin'ny tranga sasany, dia hanazava ny antony mahatonga ny fampiharana hafa hanana alalana sasany izay tsy nisy teo aloha; hanana andraikitra vaovao izy ireo.
Mahagaga. Noheveriko foana fa ny fiarovana nalaina ho an'ny lohahevitra momba ny angon-drakitra manokana; kely foana izy io ary manamafy azy io. Na izany na tsy izany, efa amidy isika.
Heveriko fa mitovy amin'ny "ree", manontany ny tenako ihany aho, maninona no ilain'izy ireo izao alalana vaovao izao raha toa ka niasa lavorary isika raha tsy nisy azy ireo, ary ambonin'izany rehetra izany, ahoana no ahafahan'izy ireo miditra amin'ny fotoana rehetra? Hiditra ve izy ireo na dia tsy mampiasa WhatsApp aza isika? Tsy tokony hatahotra ny mpamorona WhatsApp, satria misy olona an-tapitrisany maro izay hanavao azy ho azy, tsy misy fanontaniana, ary avy eo dia mpitsidika vitsivitsy amin'ny rantsan-tànana isika? fahazoan-dàlana tafahoatra loatra. Tiako ilay lahatsoratra, indrindra satria mampiharihary ireo olona adala an-tapitrisany izay tsy mahalala akory ny atao hoe permis. Ireo no manokatra ny lalao ho an'ireo izay mampiasa ny angon-tsaintsika amin'ny fikasana hametaveta, na dia tsy izany aza ny WhatsApp, farafaharatsiny mbola tsy.
Izaho dia efa nametraka ny alalana fakantsary vaovao talohan'izay
Farany havaozy ny fampiharana. Ary izao dia takatro izay miova. Ankehitriny ao anatin'ny fampiharana dia misy safidy miraiki-po miaraka amina sary na sary mihetsika ary ity dia maka sary na horonan-tsary ary mandefa azy mivantana.
Talohan'izay dia tsy maintsy nampiasa ny fampiharana fakantsary ianao, raiso ny sary ary zarao amin'ny WS, miaraka amin'ny fifandraisana tadiavinao. Ka farafaharatsiny mba hanazavana izany fa ilaina ny fahazoan-dàlana. Angamba tsy nametraka ny fanavaozana ity fahazoan-dàlana vaovao an'ny fakantsary ity dia nanaitra be fa raha vao nametraka dia toa ahy farafaharatsiny fa manana ny fanamarinana azy io. Ny zavatra iray hafa dia ny fampiasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fomba tsy ara-dalàna ny fahazoan-dàlana izay tsy eritreretiko
Web design dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, io no notadiaviko, tsy maintsy raisina ho fiarovana antsika io.
Mamaly ny famolavolana tranonkala
fahatsapana ny taniko dia hoy izy:
Manaiky tanteraka aho ... andiana fahazoan-dàlana tsy ilaina izay manararaotra ny tsiambaratelon'ny mpampiasa miaraka amin'ny fialan-tsiny amin'ny fampiasana ...
Fahazoan-dàlana hanamarina kaonty ohatra? Tsy misy dikany.
Fahazoan-dàlana hizaha fampiharana hafa? Inona no tanjona? Fitrandrahana angona ihany, veloma amin'ny tsiambaratelo indray ... sy ny maro sns.
Mampalahelo fa ny fiainana manokana dia olana saro-pady izay maro amin'ireo mpampiasa amin'ny ankapobeny ary maro amin'ireo manoratra eto no toa nanadino na tsy nahalala, tena mahamenatra !!!
Fahazoan-dàlana inona no malalaka? Inona avy ireo varavarankely sy zavatra hafa? HA! Azonao atao ny mahazo filaminana sy tsiambaratelo ao amin'ny Windows sy zavatra hafa ... amin'ny Android tsy raha tsy hoe miorim-paka ianao ary na dia tsy mitantana fampiharana aza ny fampiharana sasany dia tsy mandeha izany.
Google dia tokony ho matotra kokoa amin'ity lafiny ity ary hanadihady ny tena fahazoan-dàlana takiana amin'ireo fampiharana alohan'ny hamelana azy ireo hamoaka.
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra.
Mamaly ny fahatsapana ny tanindrazana
Marina tokoa i Francisco Ruiz. Izaho dia programmer, ary ny zavatra tokony hitranga dia isaky ny te-hanao zavatra samirery ny WhatsApp, ny rafitra fiasa android dia tokony hamaky ny hetsika ary hangataka alalana amin'ny mpampiasa finday. Raha tianao ny tsy hanontaniako anao intsony, dia mety hisy tsindry ilay varavarankely tsy hanontany intsony. Amin'izay dia afaka manome alalana ny fampiharana ianao rehefa mampiasa azy io, ary tsy mahazo alalana hanao zavatra samirery amin'ny fotoana rehetra nefa tsy fantatrao izay ataony. Nefa raha misy ny zava-misy, tsy misy azo atao ny mampiasa fampiharana android vitsivitsy, raha tsy ampidininao aloha ny pataloha ary matoky ianao fa tsy manome anao ny boriky. Ho fanampin'izany, ny alalana dia avy amin'ny fonosana!, Izany hoe tsy mamela anao hisafidy an'ity, eny, ary ity tsia. Manaiky azy fotsiny ianao na tsy mampiasa azy. Miova amin'ny fomba iray ihany io: tsy maintsy manomboka mandà ny fampiharana an'ity karazana ity ianao ary manome ho lohalaharana ireo izay manana fangatahana alalana mifanaraka aminy. Tokony hiahiahy bebe kokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka Android… Moa ve tsy ny Linux foana no nanangana ny sainam-piarovana voalohany indrindra raha nanao rano tamin'io i Windows?… Sa ny fiarovana azy io noho ny tsy fisian'ny mpampiasa marobe?. Azony arovana ianao amin'ny fidirana amin'ny faritra sasany na dia manome alalana ny fampiharana aza izahay, ary tsy manao izany izy.
Ny chat Facebook dia manara-maso ny fotoana itodihanao ny efijery, ny fizahana tranonkala ary izay rehetra azony atao ohatra. Rehefa mametraka ny rindranasa dia manontany anao raha te-hametraka azy amin'ny zavatra tsy tranga tsy manam-paharoa whatsapp ianao. Tsy misy olona miaro amin'ny fanehoan-kevitra ny fahazoan-dàlana manararaotra an'ity fampiharana ity na ny hafa, voalaza fotsiny fa tsy dia nifantoka loatra tamin'ny fanondroana rindranasa iray ny lahatsoratra rehefa samy ...
marctor dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, Francisco, saika ilay notadiaviko. Ary holazaiko aza fa alohan'ny fotoana ialohavanao, ka manasarotra ireo lazaina ho "ati-doha fandaharana" handevona. Raha tsy mihemotra amin'izany na amin'ny fampiharana mahasoa hafa dia sahiko ny maminavina vanim-potoana iray izay hifehezana sy hofehezin'ny rindranasa avokoa ny zavatra rehetra mamindra ny tamba-jotra. Fantatsika fa mila azy ireo hiditra amin'ny serivisy izay tena ilaina amintsika izy ireo ary avy eo manome azy ireo hery hiasa tsara. Miorina amin'izany ary ambonimbony kokoa ny fahamendrehana na tsia an'ny rafitra fiasa izay ihazakazahany: Inona no tsara kokoa noho ny mahazo ny toetra isan-karazany mety indrindra? Ary manontany tena aho hoe aiza ny faran'ny tonelina? . Androany dia mbola hitantsika fa azo itokisana izy ireo, toy ny amin'ity tranga ity, saingy manontany tena aho hoe inona izany ary iza no hametraka ny fetra? Tsara sy mahasalama ny manontany tena momba izany fanontaniana izany ary mampiahiahy manomboka anio. Araka ny efa tsikaritrareo dia tsy dia tafiditra ao anaty computing aho, fa aza mieritreritra ny hamafana ity lahatsoratra ity, satria indray andro any dia ho afaka hiteny amin'ny rehetra ianareo hoe: Nolazaiko taminareo fa tsy nino ahy ianareo!
Mamaly an'i marctor
Andro vitsy lasa izay whatsapp dia nanomboka nanambara tamiko ny momba ny fanavaozana tena ilaina sy ny fanisana 10 andro, rehefa manandrana manavao ny fahagagako aho dia ny haben'ny fahazoan-dàlana nangatahina, tsy iray amin'ireo namoaka ny sariny sy ny fiainany tao amin'ny tambajotra aho, Ary tsy mamela hampiharihary ny fifandraisana.
Manana Note2 misy 4.4.2 ditto aho ary nametraka app opps starter, izay mamela hanakana ny fahazoan-dàlana.
Ny fanavaozana vaovao dia mangataka fahazoan-dàlana handefa sms / mms (azoko tsara fa ampiasainao hisoratra anarana amin'ny voalohany) saingy toa hitako fa nitranga izany.
Fahazoan-dàlana hiditra amin'ny fividianana, tantaran'ny fampiharana napetraka, tantaran'ny fizahana, tsoratadidy ary tantaran'ny hetsika fitaovana. Toa tsy ilaina izany.
Fidirana amin'ny data Wi-Fi sy fitaovana mifandray aminy.
(Tsy ilaina koa izany).
Sary sy rakitra haino aman-jery multimedia, ary koa amin'ny lahatahiry sy fitaovana ivelany.
(Raha ny fahitako azy, raha mila mandefa sary ianao dia tokony hampandre ny mpampiasa ny fidirana ny rafitra ary avela amin'io fotoana io ihany izy io).
Tsy ilaina intsony ny milaza hoe, TSY METY HANARAKA aho mandra-panovana an'ity, afaka miaina tsy misy whatsapp aho.
Raha ny fahitako azy dia mahamenatra izany, ary tsy tokony avelan'ny google.
iray hafa izay lany ny wassap, mila mangataka ny nomeraon'ny kaontinao izy ireo
JJMart dia hoy izy:
Courage Francisco, misaotra anao aho tamin'ity lahatsoratra ity. Betsaka ny "tompon'andraikitra" amin'ny WhatsApp tsy manamarina ny asany, manome vola ve izy ireo? Mino toa anao sy Carlos ary ny hafa aho fa tsy ilaina ny miditra amin'ireo alalana ireo.
Valiny amin'i JJMart
Nesoriko ihany koa Wassap omaly satria, hoy ny namako Carlos manodidina eto, tsy azoko atao ny manazava momba ireo fahazoan-dàlana ireo "Fahazoan-dàlana hiditra amin'ny fividianana, tantaran'ny fampiharana napetraka, tantara fizahana, tsoratadidy ary tantaram-pitadiavana fitaovana"
Fa inona ny helo tianao hojerena hoe aiza aho no tonga amin'ny internet na inona no ataoko amin'ny fitaovako, tsy ilaina velively amin'ny fiasan'ny programa izany ary holazaiko zavatra iray ianao ry namana mpandahatra fandaharana amin'ny asanao. ny etika dia tsy maninona firy na tsy misy, izany rahampitso dia mila mahazo rindranasa manangona kaonty amin'ny banky hanaronana ny tenanao ianao, hataonao izany tsy isalasalana.
Antsoy aho hoe mpiray tsikombakomba saingy tsy hametraka apk na rindranasa piraty ho an'ny Windows mihitsy aho, satria tsy matoky ny tenako aho ary tsy matoky an'i Microsoft izay efa an-tsainao an-tsary ny programa piraty rehetra.
Nesoriko ihany koa ny WhatsApp, ny alalana angatahiny aminao handefasana hafatra vitsivitsy fotsiny, mampatahotra izany, aleoko manohy ny sms misy fandoavam-bola noho ny mifehy azy ireo =).
Edurne dia hoy izy:
Ny tena marina dia gaga ihany koa aho tamin'ny alàlana ilain'ny WhatsApp rehefa manavao, (izay aleoko fa hafatra fotsiny, toy ny tamin'ny voalohany, raha toa ka tsy mandray teny maro be) ary tonga eo amin'ny toerana iray izay tsy misy ny fahatsapantsika izany, miaraka amin'ny fialantsiny isan-karazany, dia mivarotra anay ny tsiambaratelontsika. Izany no tanjony, ary tsy misy jamba ratsy noho ilay tsy te hahita. Ny fitaovam-pifandraisana, anisan'izany ny Internet, no fitaovana tonga lafatra ahafahantsika mifehy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy zavatra hafa azo jerena momba ny fampiharana fitsikilovana nataon'ny NSA. Mpijirika sy lahatsoratra mihaino izay miasa ao amin'ny NSA Heverinao ho marina ve izany? Inona no tsy tadiavin'izy ireo hitsikilo anay? Mila mihaino fotsiny ianao, mijery ary mahita ny fomba fitantanan'izy ireo isan'andro mba hanangonana vaovao bebe kokoa. Raha miaraka amin'ny tambajotra WiFi ny fampahalalana rehetra amin'ny TV, PC sy Smartphone dia mifandray !! Fantatr'izy ireo ny tsirinay rehetra, ny pejy matetika be indrindra, fantsom-pahitalavitra na fandaharana be mpijery, fividianana, lalao, mozika alaina sns. Manara-maso anay ny orinasa, manara-maso anay izy ireo hahafantaranay ny safidinay amin'ny alàlan'ny tranokalanay, ao anatin'izany ny Facebook, Google ary Microsoft. Mihevitra ve ianao fa ny Google Maps na Angry Birds dia tsy manana tanjona samihafa, na webcam tsotra? Inona no tadiavinao fakantsary voalohany? Tsara kokoa ve ny fahitana amin'ireo mitsikilo anao? Ahoana ny fomba fitantanan'izy ireo! Marina? Manana rindranasa amin'ny findainao ianao fa raha tsy dia mandinika tsara ianao ary mamono azy io, rehefa miteny amin'ny Facebook ianao dia miseho ny toerana misy anao, ary rehefa miteny aho fa marina dia mankany amin'ny arabe misy anao io! Ary ilay olona resahina tsy mahalala akory! Nampiharin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaoninay ny lalàna manome anay, raha tsy izany dia hanjavona izany. Miezaka manangona ny mombamomba anay rehetra izy ireo !! Ary mbola mieritreritra ve ianao fa kisendrasendra? Efa naheno ny New World Order? Vondrona Bilderberg? Zava-poana ny fahalalana betsaka momba ny haitao na ny fandaharana raha tsy mahatoky azy ireo ianao. Izy ireo dia tsy manao na inona na inona ho azy na noho ny antony, ny zava-drehetra dia misy antony, tanjona ary ho antsika izay mifoha dia efa fantatsika hoe inona izany. Ho an'ireo izay mitsikera ny lahatsoratra, teneno izy ireo mba tsy ho malina sy mifantina, mety hisy hilaza fa an'ny orinasa na mandray komisiona. Mahatsiravina izany !!
Mamaly an'i Edurne
niray tetika dia hoy izy:
Mazava ho azy fa mampiasa ny angon-drakitra izahay mba hanaovana doka lasibatra sy hahazoana vola.
Sa ahoana ny hevitrao? Milatsaka avy any an-danitra ve izany Gmail izany? Ny mpizara Facebook dia maniry eo amin'ny tany toy ny ovy?
Manana serivisy mailaka tsy fantatra anarana ianao, izay tsy mampiasa ny datao mihitsy, ary mandoa vidiny ambany. Ah, tsia, fa tokony ho afaka ny Internet.
Tianay daholo izany ary maimaimpoana daholo. Inona ny delestazy xD
Mamaly an'i Conspiranoico
Farany misy olona iray mirindra ... ianareo rehetra izay mitsikera ny whatsapp noho ny alalana, manao zavatra mitovy amin'ny serivisy google ve ianareo? mamaky mailaka ny gmail hanolotra anao dokam-barotra arakaraka ny hitiavanao azy, ny fikarohana dia miorina amin'ny mombamomba anao, ny fikarohana taloha sns ... Google tsara ary whatsapp / facebook ratsy? Misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa tokony ho maimaim-poana ...
tmp dia hoy izy:
Eo no alehan'ny raharaha fa tsy maintsy takatr'izy ireo fa tsy whatsapp na google izany, satria mampiasa solosaina ianao hifandraisana, na finday na tsia, voakorontana ny mombamomba anao, ny hany mampiavaka azy dia amin'ny fampiharana alefanao azy ireo izany rehetra izany raha avy amin'ny iray hafa Amin'izany fomba izany, izy ireo no mila manangona sy mandamina ny fampahalalana rehetra amin'ny alàlan'ny firaketana feo, eny fa na dia ny dian-tanan-tànana aza dia efa misy fakan-tsary azo antoka amin'ny tranokala maro izay mifandrindra amin'ny rindrambaiko fitadiavana endri-javatra ahitana ilay hacker EYE OF GOD hacker malaza izay zava-misy fa maro no mandà tsy hino toa ny nahitanay an'i James Bond naka sary tamin'ny telefaona. Tsy maninona? Diso izany? Miankina amin'ny fomba fahitanao an'izao tontolo izao, ny filàna hahafantarana ny zava-drehetra momba ny tsirairay dia ny fizarana haingana ny fahalalana ary maro ny olona noho ny teknolojia no mamolavola zavatra kely ao anatin'ny taona iray izay mety hahalasa ireo manam-pahaizana fanta-daza antsika, taonjato maro lasa, Hitondra fiovana lehibe amin'ny zanak'olombelona izy ireo, saingy amin'ny toetran'ny olombelona, ​​ny fandrosoana lehibe dia mety ho ratsy.
Zavatra mitovy amin'izany rehefa nanandrana nanapotika ny fanandevozana izy ireo, ary ny tiako holazaina dia nanandrana satria ny karavasy dia ny volam-panjakana, ny sakafo amin'ny vola taratasy ary ny rojo vy amin'ny finday.
Mamaly an'i tmp
chesare dia hoy izy:
mifanaraka tanteraka amin'ny «Edurne» .. .. ohatra .. misy lalao mila fidirana amin'ny sary sy atiny multimedia .. raha lalao tsy mitaky fandefasana sary izany .. maninona no tianao ny fidirana amin'ny fakantsaroko sy mikrô ?? .. Lalao io ... tsy mila miantso na mandray sary aho ... noho izany ... maro ny rindranasa mangataka izany ao anatin'izany ny WhatsApp ary eny ... ny iray mandefa feo .. sary .. ary ny hafa .. fa !! .. mieritreritra izy ireo fa tsy izany Hampiasa izany amin'ny dikany roa ve izy ireo ?? .. andao !!! .. olona lehibe sahady isika .. satria nividy whatsapp ny facebook ???… satria ny ny hafatra dia nitsoaka an'io fampiharana io .. tamin'ny facebook sy whatsapp maro ny olona no nifampiresaka .. tamin'ny celualr efa hainy ny manara-maso anao .. fa maninona !! !! tsy misy jamba ratsy noho ilay tsy manao te hahita! ..
Mamaly an'i chesare
Rusticiano Treveré dia hoy izy:
Lazao amin'ny borregomatrix ny marina ary ho tezitra izy ireo. Afaka mampiasa ny fakantsarinao, mikrô, toerana, mihaino ny lahateninao ny rindranasa, mahita ny sarinao, adiresy, namana mifanatrika, sns, sns sns. Tena mampihomehy fa sosotra izy ireo ary tsy mino an'izany. Ho ahy, tohizo. Tsy misy jamba ratsy noho ilay tsy te hahita. Izy ireo dia mihodinkodina mankany amin'ny fotony ary mametraka ny lohany amin'ny tany toy ny aotirisy, izay adala ataonay changumanos indraindray. Miarahaba.
Valiny tamin'i Rusticiano Treveré
Tokony handany fotoana kely kokoa amin'ireo zavatra ireo isika ary hanomboka hijery izay tena ananantsika manodidina antsika.
Ny rafitra fiasan'ny telefaona finday no mila manakana sy mangataka alalana amin'ny fidirana amin'ny zavatra sasantsasany (na android, windows windows, ios, na rafi-piasan'ny linux na finday hafa). Misy zavatra toy ny fifehezana ireo mpampiasa amin'ny windows, na ny fangatahana teny miafina root (administrator) amin'ny linux, amin'ny rafitra fikirakirana solosaina. Tsy fehezin'ny Android io fiarovana io satria an'ny Google, izay voalohany liana amin'ny fidirana malalaka amin'ny fampahalalana manokana. Te hiala amin'ny findaiko ny android ary hametraka ny Ubuntu ho an'ny finday.
bah, misy ny olona tsy mahatakatra ilay lahatsoratra…. Ny teboka manan-danja indrindra dia ny famindrana angona, ny tena (angon-drakitra aoriana) izay ny fifandraisan'ny rindranasa napetraka ... tsy namboarin'izy ireo mihitsy ny famindrana angon-drakitra ataon'ny rindranasa tsirairay na ny habetsaky Mb izay alefan'ny fampiharana sasany tsy misy fanazavana. Mamakafaka izany aho ary afaka milaza fa whatsapp rehefa manomboka ny fifamoivoizana data na ny fifandraisana Wi-Fi, indraindray mandefa fampahalalana finday manodidina ny 30 Mb. (tsy misy fanekena) ary mamakafaka tsara ny zavatra andefasanao ... hay ny fampahalalana avy amin'ny fikarohana ao amin'ny browser, boky fifandraisana, hafatra an-tsoratra, ary sary voatahiry ao anaty fitadidiana. izany no zavatra mampiahiahy. Satria tsy fantatra ny antony sy ny toerana alehany dia manangona izany vaovao rehetra izany izy.
nuria ribot dia hoy izy:
Fanehoan-kevitra momba ny lahatsoratr'i Dario: afaka nametraka hevitra vaovao aho saingy manaiky anao 100 × 100 aho. Ny lisitr'ireo fahazoan-dàlana omenao dia feno. Tsy fantatrao izay tian'izy ireo hatao amin'izany. Tsy miaraka aminao indrindra fa olombelona mahantra voafetra amin'ny vala voafetra. Moa tsy izany. Lalànan'ny isa marobe izany. Farafaharatsiny mba atoro ahy an'io ny lohateny, tsy matematika aho ary tsy fantatro izay momba azy. Fa ny fiteny tokana dia tena mazava. Izahay ihany no manome kitay. Ahoana no fomba ilazana azy? Inona no tadiavinao? Omeko anao, amin'ny fombako izany, hitahirizana anao sambatra. Ny ankamaroan'ireny asa ireny dia mpankafy tanteraka ny YouTube ary adala amin'ireo playlists aroson'izy ireo amiko aho. Tsara.
Whatsapp dia hanao izay mivoaka amin'ny tendrony miaraka amin'ny alalana rehetra ananantsika. Tsara koa izy ireo. Ary voasarona ara-dalàna izy ireo satria amerikanina ary tena matotra izy ireo. Toy ny Airbnb, raha tsy hiteny afa-tsy izay.
Ka lalina dia lalina, ny zavatra rehetra dia avela ho an'ny fieritreretan'ny tsirairay. Iza no avelantsika hitantana antsika? Vola fotsiny no tadiavin'izy ireo, azo antoka koa fa mahatsapa ho tompon-daka amin'ny kianja filalaovana!
Mamaly an'i nuria ribot
Alahady dia hoy izy:
Ry namako, mila fanampiana aho, misy olona tsy mahazo alalana mametaka sary amin'ny findainy ve, mampifandray izany amin'ny mombamomba ahy whatsapp ary rehefa miresaka izahay dia miseho ho mombamomba ahy io sary io na dia tsy namoaka aza aho?
Adrian Vale dia hoy izy:
Tsy mandratra ny fanontaniana! Inona ho an'ny olona maro no toa fisainana lojika be, ho an'ny hafa tsy dia be loatra, ary toetran'ny olombelona ny manadihady ny anton'ny zavatra sy ny anton-javatra voarohirohy! Io no mahasamihafa ireo lasa Mpitondra lehibe sy ireo izay miaina tsotra fotsiny ny fiainany manontolo ho mpanara-dia! ... Tsy mahagaga ahy ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra momba io lohahevitra io dia ny manala azy ho fanontaniana lojika, satria eto amin'izao tontolo izao Ny 5% -n'ny mponina ihany no mandrafitra ny Mpitondra lehibe sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra ny amin'ny fomba tokony hitondran'ny besinimaro ...
Valiny tamin'i Adrian Vale
Jesosy LE dia hoy izy:
Deurys Bernardo Zapata dia hoy izy:
salama Francisco Ruiz,
Tiako ny hafatrao, omeko anao 10.
Manenina aho fa maro no tsy mijanona mamaky tsara ny fandraisanao anjara nefa tsy manontany tena momba ny olana toy ny hoe voaloa karama izy ireo amin'ny fiarovana ny fangatahana.
Manome kilasy aho ary isaky ny kilasy misy vondrona samihafa dia omeko anao ny fanamarihana, zahao ireo alalana takian'ilay fampiharana mba hiasa tsara ary mitandrema amin'ny atiny anananao ao amin'ny solosainao sy amin'izay lazainao rehefa eo akaikin'ny solosainao ianao. Fampitandremana fotsiny izany, ny mitandrina am-pitandremana dia tsy mitovy amin'ny tsy fahalalana ny zavatra hita.
Mihobia, tsara asa.
Valiny tamin'i Deurys Bernardo Zapata
Marina daholo ianao, anio, raha toa ka nanao antso avy tao amin'ny telefaona keliko tsy nisy fanekena na koa firaketana ny fiantsoana ho an'ny mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana dia mahamenatra izany ary raha ny momba ahy dia hitandrina amin'ny famaritana ny maha-zava-dehibe ny zavatra ilaina amin'ny volavolan-dalàna mahaliana. .
MANKASITRAKA NY BLOGO ANAO
Ny kinova Android amin'ny ho avy dia afaka "manapaka" rindranasa ROOT marobe
Sintomy ary apetraho Apollo Music Player amin'ny Android rehetra